UMFCCI The Republic of The Union of Myanmar
Federation of Chambers of Commerce and Industry
အသင်းချုပ်အကြောင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ လုပ်ငန်းကော်မတီများ
လုပ်ငန်းအလိုက်/ ကုန်ပစ္စည်းအလိုက် အသင်းများ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်များအသင်းများ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းများ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း
ဆောင်းပါး	ဖွဲ့စည်းပုံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ပြန်မှု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မေးခွန်း/အဖြေများ
အသင်းဝင်ရောက်ရန် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ အသင်းဝင်ရန် သိကောင်းစရာ အသင်းဝင်ရောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ အသင်းသားသက်တမ်းတိုးရန် e-CO လျှောက်ထားရန် အသင်းသားလျှောက်ရန် အခက်အခဲများကို တင်ပြရန်
ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ညီလာခံအစီရင်ခံစာ လစဉ်စာစောင် နှစ်တစ်ရာပြည့်မဂ္ဂဇင်း IMS Report
Myanmar Productivity Centre (MPC) ၏ ‌ဆောင်ရွက်ချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်‌ရေးဌာန (MPC) တည်‌ထောင်နိုင်‌ရေးစီမံကိန်းကို Japan Productivity Centre (JPC)၊ မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UMFCCI) တို့ ပူး‌ပေါင်း၍ Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် နိုင်ငံ‌တော်အဆင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်‌ရေး အဖွဲ့အစည်း (National Productivity Organization) ကို တည်‌ထောင်ရာတွင် အ‌ထောက်အပံ့‌ပေးနိုင်‌စေရန် နှင့် နိုင်ငံ၏ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အ‌သွေး တိုးတက်မှုတို့အတွက် ကူညီပံ့ပိုး‌ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ‌မေလ (၂) ရက်‌နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းကာလမှာ (၃) နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ပထမ(၂) နှစ်သည် MPC ဖြစ်‌ပေါ်လာ‌စေရန် ကြိုးပမ်းသည့် ကာလဖြစ်ပြီး၊ ‌နောက်ဆုံး (၁) နှစ်သည် MPC အဖြစ်တည်‌ထောင်ကာ စတင်လည်ပတ် ‌ဆောင်ရွက် မည့်နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Productivity Center (MPC)
Better Workplace produces better products
Better Products bring more customers and more profits to your company.
Achieve competitive and sustainable economy and become wealthy country by participation of all stakeholders.
1. To improve and promote productivity through management innovation, continuous improvement, and human resource development
2. To achieve sustainable development by promoting responsible businesses and environmental protection.
3. To create strong foundation for capacity on development of all industries